छ नं. प्रदेशमा एमालेको निर्णयले माओवादीलाई अफ्ठ्यारो – Etajakhabar
छ नं. प्रदेशमा एमालेको निर्णयले माओवादीलाई अफ्ठ्यारो
सुर्खेत, ९ माघ । प्रदेश ६ मा एमालेले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको कसरत थालेको छ । गठबन्धनको भागबन्डामा प्रदेश नेतृत्व माओवादी केन्द्रले पाउने चर्चा चले पनि एमाले संसदीय दलको बैठकले प्रदेश सरकारको नेतृत्व नछाड्ने निर्णय गरेको हो ।
संसदीय दलले प्रदेशसभामा एमालेको एक्लै ५० प्रतिशत अर्थात २० जना सांसद रहेको र एकल सरकार गठन गर्नसक्ने स्थिति रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।
प्रदेश ६ को एमाले संगठन कमिटीले यसअघि नै प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा औपचारिक दाबी गरिसकेको छ । प्रदेश संसदीय दलको निर्णयसँगै यो प्रदेशमा एमालेले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको प्रयास थालेको छ । संसदीय दलको निर्णयबारे जानकारी दिँदै एमाले नेता कँडेलले भने, ‘हामीले एक्लै सरकार बनाउने अवस्था छ, हाम्रो सहभागिताबिना सरकार नै गठन हुन सक्दैन । हामीले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने हो, यसका लागि केन्द्रमा पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।’अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।
नेता कँडेलले पहिलो बैठक आफ्नो अध्यक्षतामा बसिसकेकाले संसदीय दलको नेताका लागि अब कुनै समस्या नरहेको दाबी गरे । केही दिनभित्रै औपचारिक रूपमा दलको नेता चयन हुने कँडेलले बताए । बैठकले प्रदेशका कुनै पनि जिल्ला हालसम्म काठमाडौंसँग सिधा हवाई सेवामा नजोडिएकाले तत्काल नेपाल वायु सेवा निगम र निजी हवाई कम्पनीलाई काठमाडौंदेखि सुर्खेतसम्म सिधा हवाई सेवा सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ । बैठकले प्रदेशको राजधानी सुर्खेतबाट अन्य जिल्लामा तत्काल हवाई उडानका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ ०९, २०७४ समय: ८:१५:५०